साँच्चीकै घरभित्र मनिप्लान्ट लगाइयो भने पैसा कमाई हुन्छ ? यस्तो छ वास्तविकता !!! - Nayapul Online
प्रकाशित मिति : Friday, December 28, 2018 nayapulonline
काठमाण्डौँ । भनाई छ, घरभित्र मनिप्लान्ट लगाइयो भने पैसा कमाई हुन्छ । अर्थात जति-जति मनिप्लान्ट हुर्कन्छ, फैलन्छ, उत्तिनै घरममा समृद्धि भित्रिन्छ भन्ने मान्यता छ । मनिप्लान्ट, खासमा एक लहरे वनस्पति हो । यो इनडोर अर्थात घरभित्रै रोप्न मिल्ने प्रजातिको विरुवा हो । मनीप्लान्ट पानी वा माटो दुबैमा रोप्न सकिन्छ ।
जीवनलाई कसरी उत्सव बनाउने
तीन दिनको मौसम पूर्वानूमानः कतै मेघ गर्जनसहित चट्यांङ, तराईमा हुरी(बतासको सम्भावना